नेपाल आज | यो नीति कार्यक्रम र बजेट देशको लागि होइन, नेकपाको आफनो हो
यो नीति कार्यक्रम र बजेट देशको लागि होइन, नेकपाको आफनो हो
सांसद्लाई १० करोड होइन ५० करोड दिनुपर्छ
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम र आगामी बजेट देशको लागि नभई सत्तारुढ दल नेकपाको आफनो पार्टीका लागि मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाल आजसंग कुरा गर्दै पूर्व मन्त्री एवम सो पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले नीति कार्यक्रम र आउँदो बजेटबारे आफूहरु पूर्ण बेखबर रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘ देशका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट आउने हो भने हामीसंग परामर्श हुन्थ्यो । जानकारी दिइन्थ्यो। तर केही छैन । यो उहाँहरुको पार्टीको कार्यक्रम हो, त्यसकारण हामीलाई केही थाहा भएन । नीति कार्यक्रम र बजेट हाम्रो होइन । ’
सरकारी रवैयाप्रति निकै आक्रोशित हुँदै नेता झाले भने, ‘ नैतिकता, इमान्दारिता, जिम्मेवारी भन्ने कुनै कुरै छैन । हामीलाई हिजो पनि हाम्रा माग पूरा गर्छ भन्ने लागेको थिएन, तैपनि झिनो आशा राखेर विश्वास गर्यौं । अब त केही पनि रहेन । हामीले एक शब्द बोले क्षणभरमा मधेश ठप्प हुन्छ । समय आए त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ । ’
१० करोड होइन ५० करोड दिनुपर्छ
बजेटमा सांसद्हरुले दश करोड माग गरेको विषयप्रति नेता झाले सांसद्हरुको पीडाको कुरा उठाए । उनी भन्छन्, ‘ यो देशमा सांसदहरुको मान मर्यादा नै भएन । जहिले पनि मान मर्दन मात्रै । एउटा प्रदेशसभा सदस्य र मेयर जतिको पनि सांसद्को हैसियत छैन । जनताले सांसदसंग विकास र रोजगारीको कुरा राख्छन् । सांसदलाई कुनै अधिकार छैन । निरीह भएर बस्नुपर्छ । सांसद्हरुले नीति, नियम, कानुन बनाउने हो भनेर उसलाई अधिकारविहीन बनाउन पाइन्छ ? त्यस्तो हो भने यो सांसद् राख्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ । होइन भने सांसद्लाई १० करोड होइन ५० करोड दिएपनि पुग्दैन, त्यो भन्दा पनि बढी दिनुपर्छ । ’
नेता झाले गैर नागरिकलाई नागरिकता बितरण भएको हल्ला मच्चाएर सच्चा देशभक्त मधेशी नागरिकको अपमान भैरहेको टिप्पणी गरे । हजारौं नागरिक अझैपनि नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यलाई बिर्षेर भ्रामक प्रचार किन हुँदैछ ?
नेता झा भन्छन्, ‘ यदि कोही विदेशीलाई नागरिकता बितरण भएको छ भने त्यसको दोषी बितरण गर्ने निकाय र व्यक्ति हुन्छ । राज्यले यसको छानबिन गर्न सक्नु पर्यो । आफै विदेशीलाई नागरिकता दिने, अनि आफै नागरिकता बितरणमा अनियमितता भएको ढोल पिट्ने ?’
एकता असम्भव होइन
संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकताको विषयमा राजपाको खासै चासो छैन । फोरमसंग एकताका लागि राजपाले वार्ता टोली नै बनाइसकेपनि नयाँ शक्तिसंग राजपाको एकताबारे छुट्टाछुट्टै कुनै छलफल भएको छैन ।
झा भन्छन्, ‘ भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्न सकिन्न तर फोरम, राजपा र नयाँ शक्ति मिलेर एउटै पार्टी बन्ने कुरा असम्भव छ भन्न मिल्दैन । ’
नेता झाले प्रदेश २ को सरकारका बारेमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै भने, ‘ सरकार ढाल्ने भए ढाले भै गो नी ! केन्द्रमा पनि उहाँले उपेन्द्र यादवसंग मिलेर सरकार बनाउनु भएको छ, प्रदेश २ मा पनि यादवकै पार्टीको नेतृत्व छ । हामीलाई के को धम्की ? आँट छ भने ढाले हुन्छ ।’
‘प्रदेश २ को सरकार जनताको हीतमा छैन भनेर भन्ने ? आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उनले के के गरे ? १२ बर्ष देशलाई द्वन्द्वमा राखेर केसम्म गरेनन् ? सबै भन्नुपर्ने भयो अब ? ’ झाले आक्रोश पोखे ।
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेविरुद्ध सुक्ष्म निगरानी (भिडियोसहित)
ओली–नेपाल विवाद चर्कंदै : ओलीले भने– 'तपाईंले दिएको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना चाहिँदैन'
भारतको अर्को कदमले दिँदैछ बंगलादेशलाई झड्का
गाउँपालिकाले भातमै गरे भष्टाचार, वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ खर्च